Izakhamizi Zithi IZESA Imadolonzima Ngohlelo LwamaPre-paid Meters
Zibandlela 04, 2013
IZESA ibikwa isibethele ama pre-paid meters angu 55 000 kuphela elizweni phakathi kwangu-600 000 adingakalayo.
WASHINGTON — Izakhamizi zemadolobheni atshiyeneyo elizweni zithi uhlelo lwenkampani ye ZESA olokubethela imitshina yokuthi bebhadalele ugetsi bengakamsebenzisi olwama Pre-paid meters ezindlini zabo luhamba kancane-kancane ngoba linkampani ilokhu ingakafinyeleli izindlu ezinengi.
Umanjinela Julian Chinembiri oyisiphathamandla senkanpani ye Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution elizweni ubikwa esithi inkampani le isibethelele ama Pre-paid meters azinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lanhlanu-55 000 kuphela elizweni phakathi kwangamakhulu azinkulungwane eziyisithupha-600 000.
UMnu. Mfundo Mlilo umqondisi wenhlanganiso ye Combined Harare Residents Association utshele iStudio 7 ukuthi ngempela uhlelo lolu luyadonsa eHarare.
UMnu. Roderick Fayayo, isiphathamandla se Bulawayo Progressive Residents Association utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abalutshwane asebethole ama Pre-paid meters bakhala ngokuthi I-ZESA ibanika amagetsi angenelanga bahlale bengelawo amahofisi alinkampani aze avulwe.